Mividiana solosaina finday vaovao na efa nampiasaina - iza no tsara kokoa | TeraNews.net
mamy kery mamy amin'ny asany. www.hitontonon.pro
mahasarika avy ao ambadiky ny fandavahana.tamilsex kolejy twinks bj sy manadala.
Mividiana solosaina finday vaovao na efa nampiasaina - izay tsara kokoa
mpanoratra Nikitin Eugenius Navoaka tamin'ny 26.08.2021
Mazava ho azy fa hahasoa foana ny fividianana solosaina finday faharoa. Raha vantany vao mamarana ny boatin'ny fitaovana vaovao ny tompona voalohany dia very avy hatrany ny vidiny 30%. Ity tetik'asa ity dia miasa ho an'ny smartphone, tablette ary gadget hafa. Amin'ny fotoana tsy fahita firy ny mpampiasa dia mivarotra milina miasa feno amin'ny vidiny ambany.
Ny valin'ity fanontaniana ity dia hitovy foana - ny laptop vaovao dia tsara kokoa hatrany amin'ny lafiny tahan'ny vidiny. Tsy misy lojika hivarotana fitaovana miasa sy mahomby amin'ny vidiny mirary. Aorian'ny fivarotana solosaina findainy dia mila mividy iray vaovao ny mpampiasa. Dia tsy mazava ny antony nivarotany ilay taloha.
Eny an-tsena dia atolotra antsika tolotra tena miavaka - solosaina finday misy processeur Core i5 ambony sy Core i7 ambony. Ny fitaovana aza dia manana RAM be dia be ary misy kapila SSD. Fa inona kosa ny fatiantoka amin'ireo maodely ireo. Ity no:
Chipset efa lany andro. Tandremo fa ireo sainam-pirenena rehetra ireo dia manana processeur an'ny taranaka faha-2, faha-3, tsy dia maharitra 4-5. Izany hoe 10 taona farafahakeliny ny teknolojia. Ary fantatsika tsara fa ny mpanamboatra dia tsy mamoaka mpamily ho an'ny fitaovana efa niasa mihoatra ny 60 volana. Ilay Microsoft mitovy ihany dia mandà amin'ny fomba ofisialy ny fanohanana ireo puce taloha.
Tsy fitoviana eo amin'ny lampihazo sy ny rindrambaiko. Manomboka amin'ny programa OS sy birao, miafara amin'ny browser. Ny mpamorona dia mitady fitaovana vaovao foana. Arak'izany, ny fitaovana rehetra ao anaty solosaina finday dia tsy afaka mampiseho fampisehoana.
Tsy azo tanterahina maoderina. Eny, azo havaozina koa ny solosaina finday. Azonao atao ny manamboatra ny processeur ary manitatra ny tabilao I / O. Fa atolotra antsika ny sainam-pirenena taloha. Ny motherboard dia tsy manohana ny processeur manaraka.
Inona avy ireo fatiantoka entin'ny solosaina finday ampiasaina
Ny teboka malemy amin'ny laptop rehetra dia ny efijery LCD. Na ny matrix IPS miaraka amin'ny vahaolana FullHD aza dia may avokoa. Ary mandritra ny 8-10 taona dia tsy tokony antenaina ny fananganana loko sy ny famirapiratana. Inona ny tahiry amin'ny fividianana solosaina finday efa taloha - hanimba ny masonao. Fifanakalozana tsy mitovy ity.
Ny solosaina finday taloha, na dia manohana ny drive SSD aza izy ireo, dia manana bandwidth bandwidth ambany. Fanampin'izay, ny ankamaroan'ny solosaina finday dia mampiasa modules RAM efa lany andro. Na ny 16 GB aza dia tsy hahavonjy ilay mpampiasa raha manapa-kevitra ny hanitatra izy.
Karazana solosaina finday ampiasaina inona no azonao vidiana
Misy dikany ny mividy solosaina finday izay mifandraika amin'ny lafiny hardware amin'ny vidiny ambany. Miresaka momba ny rafitra maoderina mihoatra na latsaka isika. Izy ireo dia ny processeur 8th Gen AMD Ryzen sy Intel ary mihoatra. Ireo solosaina finday ireo matetika dia amidin'ny mpilalao mitady ny fahombiazan'ny rafitra faran'izay betsaka. Mazava fa hisy karatra sary misaraka eo amboniny, ary ho lafo ny vidin'izany. Fa ny solosaina finday toy izany dia mety ho vahaolana tsara lavitra noho ny новый... Tapaka tampoka ny fitaovana toy izany, amin'ny tsena faharoa.
Ary koa, ny solosaina finday ampiasaina indraindray dia amidy amin'ny orinasa manidy ny biraony. Tsy fahita firy ilay fisehoan-javatra, fa kendrena tsara. Amin'ity tranga ity, azonao atao ny mividy solosaina finday maoderina, na dia misy processeur kely aza. Amin'ny alàlan'ny fandoavana vola kely fanampiny, ny ivon-toeran'ny serivisy dia hametraka zavatra mamokatra kokoa any. Ary ny valiny dia tahiry tsara ho an'ny mpividy.
Tablety na solosaina misy écran touché
Laptop laptop Nokia Purebook S14 - tsy mandeha tsara ny orinasa
Xiaomi Mi Notebook Pro X 15 (2021) - solosaina finday
Windows 11 - ny fepetra takiana amin'ny hardware dia mety handevina ilay rafitra ao anaty tsimoka
Teclast TBolt 10 - solosaina finday misy fofona milay
Framework Laptop - inona izany, inona ny vinavina
X2 mini fakan-tsary ho an'ny ankizy dia tsy fakan-tsary ho an'ny ankizy mihitsy
Iza TV no tsara hovidiana - 4K na FullHD
LG DualUp - Manara-maso amin'ny lafiny 16:18
Garmin Venu 2 Plus - zava-baovao eo amin'ny tsenan'ny smartwatch
Vaovao tsy mitongilana
Kitapo henjana sy tsara ho an'ny ankizy mpianatra
Hitan'ny olona ny famantarana voalohany momba an'io aretina io
ROTOTE G21 PRO: topimaso, voafaritra
Rafitra mizara: karazana fisie rivotra, ahoana ny fomba hisafidianana
Ahoana ny fomba tsy hanafoanana ny doka YouTube amin'ny fahitalavitra
TV BOX VONTAR X3: mpiasa tsara indrindra amin'ny tetibola amin'ny 2020
New flag beelink GT-King vaovao (Amlogic S922X) Fandinihana feno
Boaty TV -V nVidia Shield TV Pro 2019: famerenana, fanitsiana
MUAMA Enence: mpandika teny maro samy hafa
mando Pussy tsara tarehy dilettante mamy mankafy lalao am-bava manome kapoka lehibe.
xxx asiana mafana vatana voajanahary camgirl mampihomehy pussy.
xxx bandy amateur euro mampinono.
Ho an'ny fiaraha-miasa, miangavy anao hifandray: teranews.net@gmail.com
© 2021 - Teranews. Zo rehetra voatokana.
cookielawinfo-checkbox-analytics 11 volana Ity cookie ity dia napetraky ny plugin GDPR Cookie Consent. Ny cookie dia ampiasaina hitehirizana ny faneken'ny mpampiasa momba ny cookies ao amin'ny sokajy "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional 11 volana Ny cookie dia napetraky ny faneken'ny cookie GDPR hanoratra ny faneken'ny mpampiasa momba ny cookies ao amin'ny sokajy "Functional".
cookielawinfo-checkbox-hafa 11 volana Ity cookie ity dia napetraky ny plugin GDPR Cookie Consent. Ny cookie dia ampiasaina hitehirizana ny faneken'ny mpampiasa momba ny cookies ao amin'ny sokajy "Other.